Yagleel Wasaarada Mustaqbalka
June 30, 2019 qawdhan
Goor gaaban adigoo,
Guri waayey laga baxay – Xasan Ganey
Maanta anoo daawanaya wareysi laga qaaday mufakir Ingiriis ah ayaa waxa uu ninkaa mufakirka ahi ku tiraabay odhaah ahayd “ 10 sano ka bacdi maxay bulshadeenu hadal-hayn doontaa?”
Runtii su’aashaas oo ah su’aal muhiima ayaan aniga laftaydu is weydiiyey waxa ay bulshada reer Somaliland ka hadli doonaan oo dhex ooli doona 10 sano kadib hadii Alle inagu simo.
Waxaan is weydiiyey tolow bulshadaadu ma qabyaalad iyo wareer iyo jiho la’aan ayay toban sano kadibna ku jiri doonaan?
Sidee isbedelada laga filayo caalamka sida horumarka laga gaadhi doono aqoonta koombiyuutarada ee hirgelin doonta gawaadhida is wada, kombiyuutar wax daweeya ama caawiya dadka, dhaqaalaha adduunka oo shaqadiisa badankiisu ay qabtaan robots iyo hubka iyo aaladaha lagu dagaalamo oo iyaguna noqon doona robot-yo.Waxaan is idhi tolow bulshadaada dhulka miyaa laga xaaqi doonaa?
Adduunyada isbedelo badan ayaa kasoo dhacay kuwaaso wax ka bedelay habkii ay dadku ugu noolaayeen adduunka. Balse isbedelkan hadda la filayo ee koombiyuutarku caqliga yeelanayo ama ku filnaanayo hawlaha uu bani’aadamku hadda qabtaa waxa lagu tilmaamaa inuu yahay isbedelkii ugu weynaa ee aadamuhu abid la kulmo.
Wadamada qaarkood waxa ay iyaga oo hormuud ka ah cilmigaa cusub ay hadana baqdin weyn ka qabaan khal-khalka iyo isbedelka uu ku keeni karo bulshadooda. In badan oo aqoonyahanadooda ka mid ah waxa ay ka digaan samaynta koombiyuutar fikiri kara oo hadhowna kaba maskax badnaan kara dadka caadiga ah.
Hadaba su’aasha isweydiinta lihi waxa weeye sidee ayaynu isbedelkaa kusoo foolka leh caalamka uga tabaabushaysan karnaa?
Siday aniga ila tahay waa in dawlada Somaliland isbedelkaa caalamka kusoo socda si ay bulshadeeda ugu diyaariso ugana tabaabushaysato samaysaa wasaarad gaar ah oo bulshada u qaabilsan geediga caalamka casriga ah.
Wasaaradan waa in loogu magac daraa Wasaarada Duuga ama Wasaarada Mustaqbalka. Waana inay noqotaa wasaarada ugu muhiimsan wasaaradaha dawlada oo dhan. Waayo waxa ay qaabilsantahay sidii ay ula kulmi lahayd baahiyaha bulshadeenu yeelanayso 10 sano ka bacdi. Wasaarad kasta oo jirta hadana waxa ay qorshayaasheeda 50% noqon doonaan qaar loo asteeyo sidii loo heli lahaa bulsho 10 sano ka bacdi noqota mid la jaanqaadi karta casriga adduunka kusoo foolka leh.
Tusaale ahaan wasaaradaha Waxbarashada iyo Caafimaadku waa inay odorasaan nooca aqoonta ay yeelanayaan ardayda qalin jabin doontaa 10 sano kadib iyo nooca adeega caafimaad ee dalku yeelanayo 10 sano kadib. Sidaas oo kale wasaarad kastaa waxa ay bilaabaysaa isu diyaarin mustaqbal iyadoo aan ka tegin wadista adeegyadeeda haatan bulshada ay u hayso.
Waxa haboon in Wasaarada Mustaqbalka gadhwadeen looga dhigo mufakiriinta ugu indheer-garadsan wadankeena oo xataa ay soo kiraystaan mufakiriin caalamiya si aynu inta itaalkeena ah u diyaar garawno geediga caalamku u biyaystay.
Previous Post Xusuus Qorkii Maxamed S Gees – Sanadihii Cadhada
Next Post Beertii Gabdhaha Caqliga Badan – Qaybtii 10aad.